Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Medicines mostly used (5) အသုံးများ ဆေးဝါးများ (N to P)
Medicines mostly used (5) အသုံးများ ဆေးဝါးများ (N to P)
359. Naproxen သည် (NSAIDs) ဆေးဖြစ်သည်။
360. Natrilix = Indapamide = 2.5 mg OD သွေးတိုးကျဆေး၊
361. Nefzodone 300-600 mg (max 600 mg) စိတ်ကျရောဂါ၊
362. NeoMercazole (Carbimazole) = Anti-thyroid substance 10 mg to 60 mg daily လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်းများသည့် ရောဂါအတွက်ဆေး၊
363. Neomycin (Sulphate) အစာလမ်းကြောင်းအား ပိုးသန့်စေရန်၊ အသဲကြောင့် ဦးနှောက်ထိခိုက်ခြင်း၊ = 1 Gm QID x 1-2 days အနာဒဏ်ရာများ၊ ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း၊ အရေပြားအနာများ၊ အသဲအလုပ်မလုပ်၍ သတိမေ့ခြင်း၊ (ကိုလက်စတီရော) များခြင်း၊ 4-12 gm Daily Orally Neomycin + Erythromycin 1 Gm Orally ခွဲစိတ်လူနာများအား ရောဂါပိုးမဝင်စေရန် ကြိုတင်ပေးပါ၊ Neomycin sulfate + Bacitracin (အင်ဖက်ရှင်) အတွက်လိမ်းဆေး၊ = Ointment,5mg; Neomycin sulfate + 500 IU Bacitracin; (0.5% Topical) ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးများ၊ နား-ကျောက်ကပ်တို့အား ထိခိုက်စေသည်။
364. Netilmicin Sulphate (3-4 mg/kg IV/IM TDS) (2.142 mg/kg BD IM/IV) နောက်ကျသော ရင်သားကင်ဆာ၊ ဗက်တီးရီးယားဝင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်း၊ ဂနိုးရီးယား၊ နှလုံးအလုပ် မလုပ်တော့ခြင်း၊ သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်စဉ် (အင်ဖက်ရှင်) ဝင်ခြင်း၊ အဆစ်ထဲပိုးဝင်ခြင်း၊
365. Neurobion (Vitamin B1 100 mg + Vitamin B6 200 mg + Vitamin B12 200 micrograms)
366. Niclosamide အူနေသန်ကောင်များ၊ = chewable tablet, 500 mg;
367. Nimesulide = NSAID (စတီရွိုက်) မပါသော အနာ-အဖျား-အရောင်ကျဆေး၊ Adults: 100 mg BD Children: 5mg/kg of body weight in2or3divided doses
368. Nitrazepam (Valium) = အတက်ရောဂါများ၊ မေးခိုင်၊ ဝက်ရူးပြန်၊ အအိပ်ပျက်ခြင်း၊
369. Nitrofurantoin = (0.714 – 1.428 mg/kg QID) 100 mg BD-QID PC x7days ဆီးအောင့်ခြင်း၊ ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်း၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ မူးဝေ၊ ခေါင်းကိုက်၊ ဝမ်းပျက်၊ ကိုယ်ပူ၊ အသားဝါ၊
370. Nizatidine = အူသိမ်အစပိုင်းရှိ လေနာဆေး၊ 150 mg OD or BD
371. Nocold (5 ml = Phenylpropanolamine HCl 12.5 mg, Chlorpheniramine maleate2mg) Adults: 1 to2teaspoonfuls 3-4 times/day; Children: 6-12 years – ½ to 1 teaspoonful 3-4 times/day အအေးမိ၊ နှာစေး၊
372. Norbactin, Norflox, Normax Eye drops မျက်စိနာ၊ မျက်ကြည်လွှာရောင်၊
373. Norethisterone (Acetate, Heptanoate) ရာသီဆင်းများခြင်း၊ ရာသီလာစဉ်နာခြင်း၊ 2.5 to 10 mg
374. Norfloxacin, Norflox, Noroxin ပဋိဇီဝဆေး၊ အစာမစားမီ ၁ နာရီ၊ စားပြီး ၂ နာရီ ခြားပေးပါ၊ အက်စစ် ဓါတ်ပျယ်ဆေးနှင့် တွဲမပေးရ၊ ရေ-အရည်များများ သောက်ရမည်၊ BD ခရီးသွားဝမ်းလျှော၊ ဆီးလမ်း ပိုးဝင်၊ ဆီးပြွန်ရောင်၊ သားအိမ်အဝရောင်ခြင်း၊ နာတာရှည် ကျားဆီးကျိတ် ရောင်ခြင်း၊ အူရောင်ခြင်း၊ 400 mg BD သားအိမ်အဝရောင်ခြင်း၊ = 800 mg stat ဆီးကျိတ် နာတာရှည်ရောင်၊ ဂနိုရီးယားကြောင့် ဆီးပြွန်အဝ ရောင်ခြင်း၊ 400 mg BD x 3-21 days ရုတ်တရက် အူရောင်ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ = 400 mg BD x5days ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ဗိုက်နာ၊ အရေပြားနီ၊ စိတ်ကျ၊ စိုးရိမ်၊
375. Novalgin (Analgin) = Dipyrone = NSAID (စတီရွိုက်) မပါသော အနာ-အဖျား-အရောင် ကျဆေး 500-1000 mg QID
376. NSAID (စတီရွိုက်) မပါသည့် အနာ-အကိုက်-အဖျားသက်သောဆေးများ
a. Analgin, Analgesin, Dipyrone 500-1000 mg QID Orally, 0.8 to 1.6 g IM/IV ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = (ရှော့ခ်) ၊ အရေပြားနီ၊ သွေးဖိအားကျ၊ ဆီးနီ၊
b. Aspirin = Disprin (Barbiturate), Sodium Salicylate, Acetylsalicylic acid (ရူမက်တစ်) ခေါ် လေးဘက်နာ ရောဂါ၊ အနာ-အကိုက်-အဖျား-အရောင်၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အရိုးတီဘီ၊ ဂေါက်၊ Adults 325-500-650-1000 mg TDS/QID, Children2to4years 160-240-320-325-480 mg QID; သွေးခဲသဖြင့် သွေးကြောပိတ်ခြင်း Adults 81-162.5-325-1000 mgaday or every other day; Aspirin 0.6-0.9 Gm4hourly ရက်တို ရူမက်တစ်အဖျား၊ Aspirin 10-15 mg/kg QID နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း၊ Aspirin 300-600 mg QID Oral
c. Dextropropoxyphene + Ibuprofen (Ibu-Proxyvon, Ibuprofen, Ibugesic စားဆေး-လိမ်းဆေး၊ 200-400 mg 4-6 hourly; 300-800 mg 3-4 hourly; Children 5-10 mg/Kg; အစာနှင့် သောက်ရမည်၊ Adults = 1.2-1.8 Gm daily in divided doses Children 20-30 mg/kg in divided doses 8-12 years = 600-800 mg; 3-7 years = 300-400 mg; 1-2 years = 150-200 mg; 6-12 months = 150 mg ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = အရေပြား အနီပြင်ထွက်၊ ဆေးစွဲ၊ အစာမကျေ၊ အစာလမ်းသွေးယို၊
d. Diclofenac (Na) 25-75 mg BD စားဆေး-ထိုးဆေး၊ Voltaren = 50-75 mg BD/TDS; Voltaren-XR = 100-200 mg QID; Diclofenac Injection = 25-50-75 mg infusion in 5% Glucose QID; နာခြင်းအမျိုးမျိုး၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ခေါင်းကိုက်၊ အစာအိမ်အောင့်၊ အနီပြင်ထွက်၊ ကိုယ်ရောင်၊ အသဲ-ကျောက်ကပ် ထိခိုက်၊ Diclofenic 3% = (အက်ဖ်သပ်စ်-အာလ်ဆာ) Aphthous ulcer လိမ်းဆေး၊ Emflam = Diclofenac 75-150 mg in divided dose
e. Dipyrone (Analgin, Alalgesin) 500-1000 mg QID Orally or 0.8 to 1.6 G IV/IM daily
f. Ibuprofen, Ibugesic 200-400-800 mg TDS/QID ရာသီလာစဉ် နာခြင်း၊ နာခြင်းအမျိုးမျိုး၊ အကိုက်၊ အဖျား၊ ကလေး၊ ၆လ မှ ၁၂ နှစ်၊ ၅-၁ဝ မီလီဂရမ်/ကေဂျီ၊ အများဆုံး ၃.၂ ဂရမ်၊ ၁ဝ ရက်ထက် မကျော်စေရ၊ အစာနှင့်တွဲပေးပါ။ ဆိုးကျိုးများ၊ အနီရောင်အင်ပြင်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းမူး၊ နားထဲက အသံထွက်၊ အိပ်ချင်၊ ဗိုက်နာ၊ ပျိူ့၊ ဝမ်းပျက်၊ အစာအိမ်နှင့် အူအနာ။
g. Naproxen = arthritis, ankylosing spondylitis, tendinitis, bursitis, gout, or menstrual cramps တို့ အတွက်ပေးသည်။
h. Nimesulide = Adults: 100 mg BD Children: 5mg/kg in2or3divided doses
i. Novalgin (Analgin) = Dipyrone = 500-1000 mg QID
j. Paracetamol, Acetaminophen, Crocin, Paracin အစာအိမ်နာ ရှိသူများအတွက် စိတ်ချရသည်၊ Adult 500 mg QID; Children 12 mg/kg QID ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ဗိုက်အောင့်၊ အနီပြင်ထွက်၊ သရက်ရွက်ကြီး၊
377. Nystatin (ဖန်းဂပ်စ်) ခေါ် မှို ရောဂါ၊
a. 100,000 units vaginal tablets မွေးလမ်းထည့်ဆေး ၁၄ ရက်။
b. Yeast (Candida) မှိုဆေး၊ 5-10 lac IU 3-4 times daily
c. မှက်ခရု ခေါ် ကလေးလျှာနာခြင်း = Nystatin Oral Suspension 4-6 mL (400,000 to 600,000 units) တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ပါးစပ်မှိုရောဂါ = 500,000 units of suspension four timesaday
d. အရေပြားလိမ်းရန် = cream or ointment, 100,000 units တနေ့ ၂ ကြိမ်။
378. Ofloxacin (ကွီနိုလုံး အုပ်စု) ပဋိဇီဝဆေး၊
a. 300-400 mg BD Oral/IV or 400 mg OD in the morning အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အရေပြားနာ၊ တင်ပါးဆုံရိုးတွင်း အင်္ဂါများရောင်ခြင်း၊ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ၊ လေပြွန်ရောင်၊ ကျားဆီးကျိတ်ရောင်၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်၊ အနာ-အကိုက်ပျောက် ဆေးကြောင့် ဖြစ်သည့် အစာအိမ်နာ၊ ဆီချိုနာ၊ သွေးထဲပိုးဝင်၊ ဗက်တီးရီးယားကြောင့် ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ တိုက်ဖွိုက်၊
b. 200 mg BD x 1-3 days ရက်တို ဆီးအိမ် ရောင်ခြင်း၊ ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်း၊
c. 200-400 mg BD Orally x 1-3 months နာတာရှည် ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်း၊
d. 300 mg BD x7days သားအိမ်ဝရောင်ခြင်း၊ ဆီးသွားပြွန်ရောင်ခြင်း၊
e. 400 mg BD x 14 days + Clindamycin 450 mg orally QID x 14 days or Metronidazole 500 mg BD x 14 days တင်ပါးဆုံရိုးတွင်း အင်္ဂါများ ရောင်ခြင်း၊
f. 400 mg BD ပိုးကြောင့် ဝမ်းလျှောခြင်း၊ 400 mg stat followed by Doxycycline 100 mg BD x 10 days ကျား အကြောရောင်၊
g. (0.3% QID Eye) မျက်စိအကြည်လွှာ ရောင်ခြင်း၊ မျက်စိပိုးဝင်ခြင်း၊
h. ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အစာအိမ်အောင့်၊ အနီပြင်ထွက်၊ ကြွက်သားနာ၊
379. Omeprazole or Rabeprazole = Proton pump inhibitor အစာမြိုပြွန်ရောင်၊ ရင်ဘတ်ပူ၊ အစာခြေရည် အထက် တက်ခြင်း၊ DU အနာ၊ အစာလမ်းမှ သွေးယိုခြင်း၊ 20 mg OD for 4-8 weeks, in sever cases increase to 40 mg OD; အချို့အစာအိမ်နာအတွက် Amoxicillin, Clarithromycin နှင့် တွဲပေးရသည်။ ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ဝမ်းမမှန်၊ အနီပြင်ထွက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ လေတက်၊ အအိပ်ပျက်၊
380. Omnacortil = Prednisolone (စတီရွိုက်) ဆေး၊
381. Otrivin Nasal Drop = Desloratadine = (အလာဂျီ) ကြောင့်ဖြစ်သည့် နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း၊
382. Oxacillin 9-12 Gm/day in6divided doses အရိုးတွင်းပြည်တည်ခြင်း၊
383. Oxytocin, Pitocin, Syntocinon သားအိမ်ညှစ်အားပေးသည့် ထိုးဆေး၊
384. Paludrine (Proguanil HCl) (Avloclor)5mg/kg Daily ငှက်ဖျားဆေး၊
385. Pantoprazole or Esomeprazole, Lansoprazole, Omeprazole, Rabeprazole အစာအိမ်မှ အက်စစ်ဓါတ်ထွက် နည်းစေသည့်ဆေး၊ ဆိုးဝါးသော အစာမြိုပြွန်ရောင်-ရင်ဘတ်ပူ-အစာခြေရည်အထက် တက်ခြင်း၊ လူကြီး 40 mg OD or BD for 4-8 weeks
386. Paracetamol, Acetaminophen, Crocin, Paracin = NSAID (စတီရွိုက်) မပါသော အနာ-အဖျား ကျဆေး၊ အစာအိမ်နာ ရှိသူများအတွက် စိတ်ချရသည်၊ Adult 500 mg QID; Children 12 mg/kg QID ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ဗိုက်အောင့်၊ အနီပြင်ထွက်၊ သရက်ရွက်ကြီး၊
387. Paromomycin 25-30 mg/kg (max.3Gm) in divided doses x7days အမီးဘားဝမ်းကိုက်၊
388. Paroxetine 20-30 mg (max 50 mg) စိတ်ကျရောဂါ၊
389. PAS P-aminosalicylic tablet, 500 mg; granules,4g in sachet တီဘီဆေး၊
390. Paspertin (Metoclopramide Hydrochloride Drops) ပျို့-အန် သက်သာဆေး။
391. Penicillamine = (ရူမတွိုက်) အဆစ်နာအတွက်ဆေး၊ 250-500 mg daily;5mg/kg TDS
393. Pepcid = Histamine-2 blockers အစာအိမ်မှထွက်သော အက်စစ်ဓါတ်နည်းစေသည့်ဆေး၊ Adults 20-40 mg BD for up to6weeks; Children 1 to 16 0.5 mg/kg BD, up toamaximum of 40 mg BD
394. Permethrin cream 5% for scabies ဝဲဆေး။ 1% = သန်းပျောက်ဆေး၊
395. Phenergan (Promethazine), Avomine အအန်-ကားမူး၊ အယား-အလာဂျီ သက်သာဆေး၊ 10 -25 mg4hourly; 0.75 mg/kg BD
396. Pheniramine Maleate, Avil (Aventis) (အင်တီ-ဟစ်တမင်း) ဆေး၊ အအေးမိ၊ အလာဂျီ၊ နှာစေး၊ ယားခြင်း၊ နှင်းကူနာ၊ Vertigo အမူးရောဂါတမျိုး၊ 0.75mg/kg TDS; 15-30-50 mg OD/BD/TDS ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = အိပ်ချင်း၊ မူး၊ ဗိုက်နာ၊
397. Phenobarbitone, Phenobarbital အတက်ရောဂါ-ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၊ အိပ်ဆေး၊ 60-180 mg daily
398. Phenol (Carbolic acid) သည် Germicidal ဖြစ်သည်။ ကြမ်းပြင်၊ ဆေးခန်းသုံးပစ္စည်းများ သန့်ရန်၊ ဖန်းဂတ်စ်ပိုးများကို နိုင်သည့်ဆေး၊ ပြင်းပါက လောင်တတ်သည်။
399. Phenylbutazone အနာ-အကိုက်သက်သာဆေး၊ ဂေါက်-ကင်ဆာဖြစ်ပြီးနာ၊ 100-200 mg TDS
400. Phenytoin 200-400 mg, Carbamazepine 600-1200 mg, Phenobarbital 100-200 mg အတက်ရောဂါ-ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကုဆေး၊ Dilantin, Epilentin, Eptoin
401. Pilex Ointment & Tablet 30 mg = လိပ်ခေါင်းအတွက်စားဆေး၊ ထည့်ဆေး၊
402. Pilocarpine (eye drops), 2%, 4% 1 drop 3-4 times daily ရေတိမ်ရောဂါအတွက်မျက်စဉ်း၊
403. Piperacillin (Na): (4.0 mg QID IV) (50 mg/kg QID IV) နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ လေးဘက်နာ၊ အာသီးရောင်၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ ဂနိုးရီးယား၊ အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အရိုး-အဆစ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ ဆစ်ဖလစ်၊ Piperacillin plus tazobactam (Zosyn) 3.75 g q6–8h
404. Piperacillin-Tazobactam 4-5 Gm IV QID ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ဖြစ်သည့် နူမိုးနီးယား၊
405. Piperazine 3.5 Gm x 2-4 days သန်လုံးကောင်၊ Ascariasis
406. Piracetam 800 mg ဆိုတာ မှတ်ဥာဏ် ကောင်းစေတယ်လို့ ယုံကြတယ်။ သုတေသန တိုင်းကတော့ လက်မခံပါ။ အသက်ကြီးလွန်းတာ၊ အရက်များတာ၊ မှတ်ဥာဏ်ထိခိုက်တဲ့ (အဇာမိုင်ယား) ရောဂါ၊ သွေးခဲရောဂါ၊ (စကီဇိုဖရီးနီးယား) စိတ်ရောဂါ၊ စတာတွေအတွက် သုံးကြတယ်။
407. Polybion (B complex) ဗီတာမင် ဘီ-စီ ပါသည့် စားဆေး၊ ထိုးဆေး၊ သောက်ဆေး၊
408. Potassium Citrate (Potrate 5) = ကျောက်တည်စေတတ်သည့် Renal Tubular Acidosis ခေါ် ဆီး အက်စစ်ဓါတ်များနေခြင်း အတွက်ပေးသည်။ ဆေးပြာကို ဝါးခြေမစားရ။ ဆီးလမ်းပိုးဝင်နေစဉ်မသောက်ရ။ ဂေါက်ရောဂါ၊ ပိုတက်ဆီယမ်နည်းခြင်း၊ ဆီးကျောက်တည်ခြင်း၊ နှလုံးခုန် မမှန်ခြင်း တို့အတွက်လဲ ပေးသည်။5mEq (540 mg) and 10 mEq (1080 mg) Tablet; 20-30-60 mEq/day (10-20 mEq 3-4 times/day) with meals or within 30 minutes after meals or bedtime snack
409. Potassium permanganate Disinfectant ရေသန့်၊ အမှိုက်ပုံ၊ ရေကူးကန်၊ ခြေ-လက်၊ ပိုးသန့်ရန်၊ (အင်ဖက်ရှင်) အတွက် လိမ်းဆေး။
410. Povidone Iodine Antiseptic Cream, Solution, Ointment အနာဆေးထည့်ရာတွင်သုံးသည့် ပိုးသတ်ဆေးရည်။ Bacteria, Yeasts, Molds, Fungi, Viruses, Protozoans ပိုးတွေကို နိုင်တယ်။ Povidone (9.0% to 12.0% iodine) ပေါ်လာမှ တကယ် အသုံးဝင်လာခဲ့တယ်။ အနာထဲဝင်လည်း ရတယ်။
411. Powergyl (Metronidazole 200 mg + Norfloxacin 200 mg) = ဝမ်းကိုက်-ဝမ်းပျက်၊ Adults: 1-2 tablets TDS; Children: 5ml (Norfloxacin 100 mg + Metronidazole 100 mg) BD; not for infants
412. Prednisolone (ကော်တီကိုစတီရွိုတ်) အရောင်လျှော့စေသည်၊ နီခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ (အလာဂျီ) ဖြစ်ခြင်းကို သက်သာစေသည်၊ ရောဂါလက္ခဏာကို သက်သာစေသည်၊ = 5-60 mg Daily Orally as single dose or double dose on alternate days or 5-60 mg Daily Prednisolone 40 mg/day + Amoxacillin 250 mg TDS x7days နားအရည်ယိုခြင်း၊ Prednisolone 40-60 mg Orally daily with tapering over2weeks ရက်တို ရူမက်တစ်အဖျား၊ Prednisolone 60-80 mg daily in divided doses x 4-5 days followed by tapering of dose x next 7-10 days မျက်နှာတခြမ်း လေဖြတ်ခြင်း၊ Bell’s Palsy ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ကိုယ်ရောင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ မပေးသင့်၊ ကလေးငယ်များ မပေးသင့်၊
413. Pre-Hist-D Tablets အအေးမိ၊ နှာစေး၊ အယားသက်သာဆေး၊
414. Primaquine 26.3 mg salt (15 mg base) OD x 14 days only after returning home iSufzsm;/ Malaria Prevention; Primaquine, Primacip, Rimacip (ဗိုင်းဗက်စ်) ငှက်ဖျားပျောက်ဆေး၊ 7.5 mg BD x 14 days Children over 1 yr; 0.25 mg/kg x 14 days ငှက်ဖျားကာကွယ်ဆေး၊ 15 mg/day during the last2weeks of Chloroquine prophylaxis ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အနီပြင်ထွက်၊ အားယုတ်၊ ဗိုက်နာ၊
415. Procainamide: Adult = 100 mg/ml in 10-ml ampoule; tablet 500 mg QID Orally; Children = 0.5 mg/kg/hr IV; 8 mg/kg QID Orally သွေးခုန်နှုန်း မမှန်ခြင်းအတွက် ထိုးဆေး-စားဆေး၊
416. Procaine Benzylpenicillin, Penicillin G (ဘီတာလက်တင်) အုပ်စုဝင် ပဋိဇီဝ ထိုးဆေး၊ Procaine Penicillin 2.4 million units IM OD + Probenacid 500 mg QID x 10-14 days အာရုံကြော ဆစ်ဖလစ်၊ Procaine penicillin 2-4 million units IM 10-14 days ဆစ်ဖလစ် ပဌမဆင့်၊ Procaine Penicillin Inj. 600,000 units IM x 5-10 days အာသီးရောင်၊ လည်ချောင်းနာ၊
417. Prochlorperazine 10 mg IV အအန်ပျောက်ဆေး၊ (မိုင်ဂရင်း) အရေးပေါ် ထိုးဆေး၊
418. Prochlorperazine 10 mg IV, Excellent antiemetic Migraine Emergency treatment (မိုင်ဂရင်း) အရေးပေါ် ထိုးဆေး၊
419. Proguanil (Tablet 100 Mg for only in combination with Chloroquine) ငှက်ဖျားဆေး၊
420. Promethazine (HCl) (အင်တီဟစ်တမင်း) ဆေး၊ အအန်-အယားသက်သာ၊ အင်းဆက် ကိုက်ခြင်း။ ခရီးသွားစဉ်ခေါင်းမူး၊ 10 -25 mg4hourly; 0.75 mg/kg BD ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = မူးဝေ။ စိတ်လှုပ်ရှား၊ ဗိုက်နာ၊ အာခြောက်၊ မျက်စိအားနည်း၊ ရင်တုံ၊ Acute Periphreral Vertigo Emergency treatment ရုတ်ရက် အပြင်းအထံ ခေါင်းမူးရောဂါအတွက် အရေးပေါ်ဆေး 25-50 mg 6-8 hourly သောက်ဆေး၊
421. Propranolol = Inderal, Betabloc Forte, Betacap, Ciplar, Manprolol (ဘီတာ-ဘလော့ကား) Adrinaline ကို တားဆီးမှုလုပ်သည့်အုပ်စုဆေး၊ သွေးတိုး၊ လည်ပင်ကြီးဟော်မုန်းများခြင်း၊ နှလုံးခုန် မမှန်ခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ၊ (မိုင်ဂရင်း) အမူးရောဂါ၊ အကြောက်ရောဂါ၊
a. Hypertension သွေးတိုး 40 mg BD လိုအပ်လျင် တိုးပေးပါ။ 120 mg to 240 mg per day နှင့် ထိန်းထားပါ။ တချို့က 640 mg အထိ လိုတတ်သည်။
b. Angina pecetoris ခေါ် နှလုံး သွေးကြော ကျဉ်းရောဂါ 80 mg to 320 mg BD/TDS/QID,
g. ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = သွေးဖိအားကျ၊ နှလုံးခုန်နှေး၊ လက်ဖျားအေးစက်၊ အိပ်မပျော်၊ အားယုတ်၊ စိတ်ကျ၊ အန်-ပျို့၊ ဝမ်းချုပ်၊
422. Proton pump inhibitors (Omeprazole, Rabeprazole) အက်စစ် အထွက်နည်းဆေး 20-40 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁ လ၊ ၁ လခွဲ သောက်ပါ။ Histamine H 2-receptor Antagonists (Ranitidine) အက်စစ် အထွက်နည်းဆေး 150 mg တနေ့ ၂-၃-၄ ကြိမ်။
423. Proxyvon, Spazmo-proxyvon အနာသက်သာစေသည်အပြင်းစားဆေး၊ အအန်သက်သာစေသည်၊ 0.930 to 1.430 mg/kg4hourly
424. Pseudoephedrine 30-120 mg + Nasal Oxymetazoline 0.5% ရက်တို ဆိုင်းနပ်စ်၊
425. Pyrazinamide တီဘီဆေး၊ တခြားဆေးနှင့်တွဲပေးရသည်၊ 15-30 mg/kg/day Maximum 2.5 Gm/dose တီဘီကုသရန် ပဌမ ၂ လအတွင်း ပေးသည်။ (လူကီးမီးယား) ရောဂါ၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊